သင့်နဲ့သင့်ချစ်သူ တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် ပိုပိုချစ်လာစေမယ့်နည်းလမ်း – Tameelay
လက်ချောင်း အတိုအရှည်ကို ကြည့်ပြီး အမျိုးသား တစ်ဦး၏ စ်ိတ်နေစိတ်ထားကို ခန့်မှန်းနိုင်
အမျိုးသမီးများ အတွက် သတင်းကောင်း တစ်ခုရှိနေပါပြီ။ ကိုယ်နှင့် ဒိတ်လုပ်သည့် အမျိုးသားသည် ရက်ရောသူ ဖြစ်သလား၊ တွန့်တိုတတ်သည့် ကပ်စေးနည်း ဖြစ်သလားကို သိရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်း ရှိနေပါပြီ။ သိနိုင်ဖို့ အတွက် သူ့အလုပ်အကိုင် ကိုလည်း မမေးပါနှင့်။ သူ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ကိုလည်း မကြည့်ပါနှင့်။ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုသာ …
အချစ်ရေးကို ထိခိုက်စေမည့် အမှားများ
ချစ်သူရည်စားဆက်ဆံရေးဆိုတာ ထိလွယ်ခိုက်လွယ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ တကယ်လို့များ လမ်းခွဲပြတ်ဆဲပြီးသွားကြပြီဆိုရင်လည်း အဖြေမရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကျန်နေခဲ့တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲ ? ငါ ဘာများ မှားသွားလို့လဲ? စသဖြင့် မေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို သင့်အနေနဲ့ နောက်တစ်ခါ ချစ်သူရည်းစားထားတော့မယ်ဆိုရင် အလားတူစိတ်ပျက်စရာအခြေအနေတွေ မကြုံရအောင် Relationship …
ကောင်လေးတွေ သဝန်တိုလာရင် လုပ်တတ်တဲ့ အရာ(၆)ခု
ယောင်္ကျားလေးတွေ သဝန်တိုလာရင် မိန်းကလေးတွေလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်မပြောပြ တတ်တာကြောင့် ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို မိန်းကလေး ဘက်က နားမလည်ရင်တော့ ပြသနာဟာ တအုံ့နွေးနွေး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သင့် ချစ်သူ ကောင်လေး ဒီအရာလေးတွေကို ပြုလုပ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ သူ သင့်ကို သဝန်တို …